I-Midas Connect, eyona nto iphambili kunxibelelwano lweemoto ezingaxhunyiwe | Iindaba zeGajethi
I-Midas Connect, eyona nto iphambili kunxibelelwano lweemoto ezingadibananga
UMiguel Gaton | | Izicelo, ngokubanzi
Indaleko yetekhnoloji kwicandelo leemoto kuthetha ukuba iimodeli ezindala kuneminyaka emihlanu zihlala iphelelwe lixesha kwitekhnoloji ukuba sibathelekisa nabantu abafikayo kwintengiso. Inani lezinto ezinokwenziwa zezi modeli ziyanda kwaye phakathi kwazo kukwenziwa iglasi, umnxeba ongxamisekileyo okanye nokufikelela kwi-intanethi.
Inkqubo Midas Qhagamshela ijolise ingqalelo yayo ekuhlaziyweni kwezithuthi ezingenazo ezi zixhobo zetekhnoloji yakutshanje. Ndiyabulela ekudalweni kwale sicelo seselfowuni, umsebenzisi wemoto unokukwazi ngexesha langempela, ngenkqubo yokunxibelelana, idatha yesithuthi sakhe. Oku kusebenza ngaphezulu kwe-85% yezithuthi ezenziweyo ukusukela ngo-2002 ngenxa yesixhobo sobuchwephesha kunye nosetyenziso olukhoyo nge-iOS ne-Android ukudibanisa ngokupheleleyo imoto kunye nomqhubi.
Midas Qhagamshela inikeza umsebenzisi uluhlu lweenkonzo ezenza ukuba ukuqhuba kukhuseleke kwaye kubenomdla ngakumbi. Enye yezona zinto zibalulekileyo yile i-geolocation yesithuthi ngexesha lokwenyani. Oku kuzakusebenza kunyanzelekile kuzo zonke izithuthi ezitsha ezithengiswe kwi-European Union ukusukela ngo-2018. Ngayo, kulindeleke ukuba ubusela beemoto buncitshiswe ngokunjalo nokufa kwabantu kwiingozi kuya kuncipha kakhulu. Nangona kunjalo, iimodeli ngaphambi kwalo mhla aziyi kuba nayo kwaye iMidas Connect sesona sixhobo silungileyo sedemokhrasi yokunxibelelana kweemoto nokuba ayisosizukulwana sakutshanje.
NgeMidas Connect, umqhubi angazisa usapho ukuba ufumene ingozi okanye ukubuna ukuze ukuthembeka kwakho kukhuseleke. Ukongeza, ukuba isithuthi sibiwe, umniniyo unakho yazi ngqo ukuba ikuphiKuba ngokudityaniswa kwifowuni yakho ephathekayo, uya kusazi isantya ojikeleza ngaso kwaye ukuba ushiya umjikelezo wokhuseleko obumakishe ngaphambili.
Oku kusebenza kuluncedo kakhulu ekufumaneni isithuthi xa simise kwindawo esingayaziyo okanye ukuba siyishiyela abantwana bethu, kuba siya kwazi ngawo onke amaxesha ukuba bakuphi kunye nokuziphatha kwabo emva kwevili, enkosi kwinkqubo 'yoLawulo lweMoto'. Umqhubi uya kuba nakho ukwazi ubume beengcango (zivuliwe okanye zivaliwe), ukuba izibane zishiyiwe okanye ukuba ibhetri ichanekile. Ukongeza, uya kulazi nenqanaba lamafutha onawo kwaye ziphi izikhululo zeenkonzo ezikufutshane nendawo yakho yokufaka i-refuel.
IMidas Connect, iqhagamshelwe ngokuqhubekayo kwisithuthi, iya kwazisa umsebenzisi wayo xa isenza njalo Ukupasa ukukhangelwa okuthe rhoqo kucetyiswa ngumenzi. Ndiyabulela kulo msebenzi, umsebenzisi uya kuphucula uqoqosho lwabo njengoko isithuthi siya kuba kwiimeko ezifanelekileyo zokusetyenziswa kwaye ke akusayi kufuneka sijongane neendleko ezingaqhelekanga ngenxa yokonakala okungalindelekanga. Ukongeza, uya kuhlala usaziswa ngenani leekhilomitha ozihambayo kunye nokusetyenziswa komndilili wepetroli ukuze uziqhelanise nokuqhuba kweyona ndawo ihlala izityalo nezinto eziphilayo, kunye nolondolozo olulandelayo.
1 Uyifaka njani iMidas Connect?
2 Khuphela usetyenziso lweMidas Connect lwe-iOS kunye ne-Android
Uyifaka njani iMidas Connect?
Ukusebenza kunye nofakelo lweMidas Connect yile ilula kakhulu kwaye ayibizi. Ngothungelwano lwamaziko asemthethweni aseMidas kunye nexabiso le- € 59,95 kuphela singasifaka esi sixhobo emotweni yethu. Ukwenza oku, umqhubi ofanelekileyo uya kufaka isixhobo seXee kwisithuthi sethu kwaye asivumelanise kunye ne-Midas Connect app esiza kuthi siyikhuphele ngaphambili kwiVenkile yeApple okanye kuGoogle Play kwifowuni yethu.
Nje ukuba uqhagamshelo lwesixhobo esiphathwayo sifezekiswe, siya kufumana ulwazi uMidas Connect asinika lona ngokuqhubekekayo. Ezi nkonzo zihlala zihlaziywa kwaye ukongeza, akukho zindleko zenyangaKe ngoko, ukongeza ekubeni ukhululekile kwaye usebenze kakhulu, kuqoqosho kumsebenzisi.
Khuphela usetyenziso lweMidas Connect lwe-iOS kunye ne-Android
Umthuthukisi: Midas International
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » I-Midas Connect, eyona nto iphambili kunxibelelwano lweemoto ezingadibananga
I-NotPetya yindawo entsha yokuhlawulela ebeka iinkampani zitshekishe
Ngaba iselfowuni yakho ingalinciphisa ixesha lokujonga?